कांग्रेस रुपान्तरणः नेताले होइन नीतिले, व्यक्तिले होइन विचारले-सुनार - Mahendranagar Post
Home Top News कांग्रेस रुपान्तरणः नेताले होइन नीतिले, व्यक्तिले होइन विचारले-सुनार
कांग्रेस रुपान्तरणः नेताले होइन नीतिले, व्यक्तिले होइन विचारले-सुनार
कञ्चनपुर-नेपाली कांग्रेस कैलालीको आगामी २७ गते जिल्ला अधिवेशन हुँदै छ। यस अघि प्रदेश अधिवेशनका करण जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको थिएन।कैलालीमा १८ हजार भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसको दाबी छ
जिल्ला सचिवका लागि चार जना दावेदार छन्। उनीहरु आ आफ्नै तरिकाले जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिजाउने तरिका अपनाईरहेका छन्। यसैमध्येका एक हुन् युवा नेता नृप सुनार। सुनारले जिल्लामै सचिवका लागि प्रचार–प्रसार तिव्र पारेका छन्। उनीसँग हामीले अन्तर्वाता लिएका छौं।
१) नेपाली काँग्रेस कैलालीको जिल्ला अधिवेशन नजिकिँदै छ । तपाईले अधिवेशनलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ?
सर्बप्रथम यो महत्वपूर्ण संवादका लागि धन्यवाद ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत गाउँ, नगर र जिल्लाबाट विभिन्न तह हुँदै चुनिएका ४,७४३ जना प्रतिनिधिले आफ्नो शसक्त केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरिसकेका छन्। केन्द्रमा प्रतिनिधिहरुले आम नेता कार्यकर्ताको मात्रै होइन आम नागरिकले गरेको अनुमान र अपेक्षा, विश्लेषक एवं बृद्धिजिवीहरुले गरेका विश्लेषणहरु भन्दा धेरै माथि उठेर विवेकको परीक्षा उत्तीर्ण गरिसक्नु भएको छ।मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि संघीय संरचना अनुरूप पहिलो पटक भएको निर्वाचनको माध्यमबाट कांग्रेसले पार्टीको संगठन मात्र होइन, नेपालको संविधानलाई समेत थप मजबूत बनाएको छ।
मुलुककै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र समावेशी पार्टीको मान्यता व्यवहारमै स्थापित भएको छ।अग्रज र अनुभवी पार्टी सभापतिको अनुमोदनदेखि रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको सन्देशसहित विचार राजनीतिको दिग्विजय भएको छ। कांग्रेसलाई देशकै भरोशायोग्य पार्टीका रुपमा उभ्याउँदै आम जनमानसमा आशासहितको राजनीतिक जागरण पैदा गरेको छ। महाधिवेशनले गगन थापाको समुन्नत नेपालः समृद्ध नेपालीको संकल्पदेखि पहिले राजनीतिक परिवर्तन अब राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने विश्वप्रकाश शर्माको एक प्रकारको विद्रोहलाई अनुमोदन गरेको छ। यो सबै परिघटनासँग नेपाली कांग्रेसको भविष्य मात्रै होइन, नव नेपाल निर्माणको सपना पनि जोडिएको छ।
अब रह्यो नेपाली काँग्रेस कैलालीको अधिबेशनको कुरा। यसअघि जिल्ला अधिवेशन हुन नसकेका देशभरका १६ जिल्लामा पौष २७ र २८ अधिवेशन हुँदैछ। त्यसमा कैलाली पनि एक हो। नेपाली कांग्रेस कैलालीको जिल्ला अधिवेशन धनगढीमा भव्य रुपमा सम्पन्न हुँदैछ। यो अधिबेशनसँग दुईटा कुरा जोडिएका छन। पहिलो, आगामी ४ बर्षका लागि जिल्ला कार्य समितिको चयन।
दोस्रो, सुदूरपश्चिमकै राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको कैलालीमा कांग्रेसले अंगिकार गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण। यसर्थमा कांग्रेसले राष्ट्रिय रुपमा लिने नीति, रणनीति एवं कार्यक्रमलाई स्थानीयकरण गर्न, जिल्लाका मौलिक सम्भावना, यहाँको संवेदनशीलता र अपार सम्भावनाहरुको पहिचान एवं परिचालनमा कैलालीका आम कार्यकर्तालाई जोड्न र आम निर्वाचनका मतदाता (जनता) समक्ष कांग्रेसलाई देखिने, सुनिने र बुझिने गरी प्रस्तुत गर्न त्यहीअनुसारको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। २,५७२ भन्दा बढी जिल्ला अधिबेशनका प्रतिनिधि, १८,००० हजारभन्दा बढी क्रियाशिल सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले यसलाई राम्ररी बुझ्नुभएको छ। कांग्रेस कैलालीको यो महाउत्सबमा हामी सबै शसक्त नेतृत्व चयनका लागि लालायित छौं। त्यसमा यो अधिवेशन कोशे ढुङ्गा बन्ने छ।
अहिलेसम्म हामी सबैले नवीन कांग्रेसको कल्पना गर्यौं, त्यसअनुसार बोलेर, लेखेर तथा छलफलको माध्यमबाट योगदान गर्यौं। अब जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधिको विवेकसम्मत मत, शुभेच्छुक, समर्थकहरुको सद्भावबाट कैलालीमा नवीन, गतिशिल र ऊर्जावान कांग्रेस निर्माण गर्ने अवसर आएको छ। सहमती, एकता र रुपान्तरण गर्ने १४औं महाधिवेशनको मुल भावनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले केन्द्रमा अभिव्यक्त गरिसके। कैलालीमा पनि त्यही मर्मलाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्न सबै तयार छौं। यसमा सबैको सहयोग हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
२) तपाईले जिल्ला सचिवको लागि आधिकारीक रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको देखिदैन? जिल्लामा तपाईको चर्चा चलिरहेको छ नि ?
मलाई लाग्छ कैलाली कांग्रेसको सचिवको उम्मेदवारका रुपमा मेरो चाहना र तयारीका विषयमा आम नेता कार्यकर्ता जानकार हुनुहुन्छ। धेरैलाई मैले नै मेरो उम्मेदवारी सचिवमा हुन्छ भनेको छु र धेरैले तपाई सचिवका लागि उपयुक्त पात्र हो तयारी गर्नुस् भनेर सुझाव दिनुभएको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु। र, जिल्ला कार्यसमितिमा आएको केही समयपछि नै मैले मेरा अग्रज आदर्णीय नेताहरु, १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत आम कार्यकर्ता एवं शुभेच्छु र त्यसपछि क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई भेटेरै मेरो उम्मेदवारीका बारेमा जानकारी गराइसकेको छु। अब केही दिनमा मेरो उम्मेदवारी र मेरो सभापतिसहितको टिमका बारेमा तपाईंलगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुका माझमा सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्नेछु।
३)अब कैलालीका वर्तमान पार्टी सभापति नर नारायण शाह ‘मनु’पनि प्रदेश महामन्त्रीमा विजयी भइसक्नु भयो। प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । तर, तपाई कुन प्यानलबाट अधिवेशन लड्दै हुनुहुन्छ ?
केन्द्रीय महाधिवेशनपछि देशभरीका आम नेता कार्यकर्ता र जिल्लामा मतदान गर्ने प्रतिनिधिहरुमा पनि नयाँ उमंग छ। नवीन, शसक्त र रुपान्तरित कांग्रेस बनाउने कुरा आम कार्यकर्ताको प्राथमिकता हो। त्यससँग व्यक्तिको क्षमता, लगनशीलता, आवश्यकता पनि जोडिन्छ नै।अर्को कुरा, प्यानल सभापतिले बनाउने हो सचिबले होइन। अहिले देखिएका सबै उम्मेदवारहरुले सचिबमा युवा साथीहरुलाई अगाडि बढाउने सोच बनाउनुभएको छ।
यसका साथै कैलाली जिल्लाबाट अहिले ७ जना केन्द्रीय सदस्य र निवर्तमान जिल्ला सभापति प्रदेश महामन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरु सबैको चिन्ता राम्रो जिल्ला कार्यसमिति चयन गर्ने र आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउनेमा छ। उहाँहरु सबैले बनाउन चाहेको कैलाली कांग्रेस, त्यसको शसक्त माध्यमका रुपमा रहने जिल्ला कार्यसमितिभित्र म पनि हुन्छु। लोकतान्त्रिक र जीवन्त कांग्रेसमा कांग्रेस स्थायी कुरा हो, प्यानल अस्थायी। यति भनिसकेपछि प्यानल त केही दिनमै थाहा भइहाल्छ नि!
४) वर्तमान सभापतिको भूमीका अब फरक होला नि ? शाहको समर्थन रहने टीममा सचिवका आकाक्षी अरु पनि छन् । अनि केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रणबहादुर रावल, नृप वड र सुशिला मिश्रले तपाईलाई साथ दिनुहुन्छ ? कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
तपाईले नाम लिनुभएका सबै मेरा आदर्णीय नेता हुन्। कैलाली काँग्रेसमा म उहाँहरुसँगै छु। उहाँहरु सबैलाई मेरो बारेमा धेरै कुरा थाहा छ। कैलालीमा कांग्रेसलाई सबल, सक्षम र गतिशील बनाउने कुरामा म उहाँहरु सँगसगै छु। म नेपाल बिद्यार्थी संघमा रहँदा होस् या तरुण दलमा, पार्टीका हरेक मोर्चामा मेरो क्रियाशीलता, जिल्ला कार्य समितिमा हुँदा होस् या जेल बस्दाका दिन, मेरो स्वभाव, काम गर्ने शैली र क्षमताका विषयमा उहाँहरु सबै जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरुले म प्रति निकै आशा र विश्वास गरेको कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु। मेरो शालीनता, धैर्यता, संयमता, परिपक्वता र उहाँहरुप्रतिको आदरभावले सबैको साथ, सहयोग र समर्थन मलाई हुन्छ।
५) तपाईलाई नै जिल्ला सचिवमा जिताउने आधारहरु के–के छन् ? बुँदागत रुपमा भनिदिनुहोस न ?
म विद्यालयमा पढदै गर्दा जानेर होस् या नजानेर कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनमा लागे। मेरो युवा अवस्थाको सम्पूर्ण ऊर्जावान समय पार्टी राजनितिमा खर्चेको छु। ५ वर्ष कैलाली कांग्रेसमा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख रहेर १२६ वटै वडामा प्रशिक्षणका गतिविधि गर्ने देखि जिल्लामा ठूला ठूला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यमा मेरो भूमिका रह्यो। यो कुरा सबैले देख्नुभएकै छ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा मैले १३ वटा पालिकाको घोषणा पत्र तयारी समितिको संयोजक रहेर काम गर्ने अवसर पार्टीले दियो। त्यो जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा जिल्लाभर पार्टीका शुभेच्छुक, बुद्धिजिबी, पार्टीका नेता कार्यकर्ताले मेरो भूमिका, सक्रियता, लगनशीलता र क्षमता नजिकबाट नियाल्नु भएको छ। यसका साथै पार्टीले संचालन गरेको जागरण अभियान, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र पार्टी संगठकका बिचमा समन्वय र सहकार्य गर्नेदेखि जिल्ला कार्यसमितिले १३ वटै स्थानीय तहका संगठन र जनप्रतिनिधिका बिचमा आयोजना गरेको कार्यशालामा मैले सहजीकरण गरेको सबैलाई थाहा छ।
कोभिड–१९ को महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि हामीले सुझबुझका साथ पार्टीका गतिविधि जारी राख्यौं। त्यस बेला पनि वर्तमान जिल्ला सभापती र जिल्ला कार्य समितिको साथ र समन्वयमा जुममार्फत कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दियौं। त्यसमा पनि मैले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरे। कैलाली काँग्रेसलाई डिजिटल कांग्रेस बनाउने अभियानदेखि स्थानीय तहको विकास निर्माणको अनुगमन समितिमा रहेर स्थानीय तहमा भएका र हुने गरेका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापमा सचेतिकरण एवं न्यूनीकरणमा मैले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलातापूर्वक बहन गरे।
यी भूमिका र जिम्मेवारीले मलाई थप परिपक्व बनाएको छ। यि कार्यले मेरो क्षमता अभिबृद्धि, नेता कार्यकर्तासँगको सामिप्यता बढाउन र जनतासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पुगेको छ। यो अनुभव, सिकाई र क्षमतालाई सचिब पदमा रहेर पार्टी र जनताको हितमा प्रयोग गर्न चाहन्छु। यो विगतका कुरा भए, जो मेरो ठूलो शक्ति र पूँजी हो। यो सँगै मेरा केही योजनाहरु छन्। परम्परागत शैली र व्यवहारले बदलिँदो परिवेशमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव छैन। व्यक्ति चयनले मात्रै पुग्दैन– उसको चरित्र, पार्टीप्रतिको निष्ठा, संगठन र कांग्रेससँग फाटेका मन जोड्ने, जनसवालमा सक्रिय भई निर्वाचनमा मत पनि जाड्ने दृढ संकल्पसहितको नेतृत्व चयन गरिनु पर्दछ। जसका लागि निम्न पक्षहरुमा मेरो विशेष जोड् रहने छ।
–क्रियाशील सदस्य र शुभेच्छुक संघसंस्थाको रेकर्ड अध्यावधि गर्ने
विधानमा क्रियाशील सदस्यता प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने भनिए पनि निर्वाचनमा मात्रै नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। क्रियाशीलताको रेकर्ड अध्यावधि गरी आगामी कार्ययोजना माग गर्ने परिपाटी बसाल्न र शुभेच्छुक संघसंस्थाका नेतृत्व, त्यसमा आबद्ध भएकाहरुको विवरण अद्यावधिक गर्न मेरो पहल रहने छ।
–कार्यक्षमताको मूल्यांकन, अवसरको न्यायसंगत वितरण
पार्टीमा केहीलाई ‘लाभै लाभ र केहीलाई विलापै विलाप’ को अवस्था छ। विशाल सदस्यहरुको समूहमा रहेका नेताकार्यकर्ताको क्षमता पहिचान गरी भूमिकासहितको जिम्मेवारी दिनु पर्दछ। कांग्रेस बनाउने हुटहुटी, योग्यता र क्षमता भएका नेताहरुलाई त्यहीअनुसारको भूमीका दिने कुरामा मेरो जोड् हुनेछ।
नेतृत्वसँग पाँचवर्षे (चार होइन र ?) कार्यकालमा गरिने कार्यहरुको वार्षिक क्यालेन्डर हुनुपर्दछ। प्रत्येक वर्ष संगठनको तहगत रुपमा संलग्न पार्टीका सदस्यहरुबीच छलफल गरी संगठन सुदृढीकरण मार्गदर्शनसहितको परिपाटी निर्माण गर्न लाग्ने योजना छ।
–मध्यस्थता र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्व
पार्टीमा गुटगत, विभिन्न स्वार्थका कारण कार्यकर्ता र नेतृत्व तहमा बेमेल उत्पन्न हुन्छ। यस्ता मतभेदले पार्टीलाई आन्तरिक रुपमा र आम निर्वाचनमा क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसको समयमै पहिचान गरी तिनको सही व्यवस्थापन, निराकरण गर्न मेरो भरपूर प्रयास हुनेछ।
–अर्जुनदृष्टिः आम निर्वाचन
आगामी बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरसम्म बाँकी तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक सीमा छ। विगत निर्वाचनमा कांग्रेसले कहिले निर्वाचन हार्यो र कहिले जित्यो पनि। तर आमजनताको आशालाई निराशामा परिणत हुन दिएन। कांग्रेसलाई कांग्रेसबाहेक कसैले हराउन सक्दैन। यसर्थ कांग्रेसको पूँजीलाई जोगाउँदै नयाँ मतदातालाई जोड्न आशाको सञ्चार गर्ने कार्यमा मेरो समन्वयकारी भूमिका र संकल्प रहने छ। उल्लेखित अनुभव, योगदान र योजनाको जगमा म पार्टीको चुनावी मैदानमा होमिन लागेको हुँ। यि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो पार्टीका मतदाताहरुको विश्वासलाई डग्मगाउन नदिने मेरो संकल्प नै सचिब पदमा चुनाब लड्ने र जित्ने आधार हुन्।
६) काँग्रेसभित्र अझै गुट उपगुट कायमै छ। जिल्लामा पनि त्यो रोग कायमै छ। तपाईलाई त इतर समूह भनेर आरोप पनि लगाउने गरिएको छ। तपाई माथि लागेको आरोपलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?
भरखरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशनले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्दा अब गुटको होइन काम गर्न सक्नेलाई उसको क्षमताअनुसारको भूमिका दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। गगन थापाको साहस र विश्वप्रकाश शर्माको बिद्रोहपछिको जित त्यसैको अनुमोदन हो।पार्टीभित्र विचार समूह रहन्छन् तर ति अस्थायी कुरा हुन्। अहिले म जिल्ला कार्यसमितिमा छु।
म जिल्ला कार्यसमितिमा आएको ‘डे वान’देखि नै जिल्ला नेतृत्वको पक्षमा छु। त्यो नेतृत्व पार्टीको सस्थापन पक्ष हो। त्यही संस्थापन पक्षमै भएकोले मैले जिल्लाका हरेक गतिविधिमा काम गर्ने भूमिकामा छु। यदी त्यसो नहुँदो हो त अहिलेको जिम्मेवारी र भूमिका सम्भव नहुन सक्थ्यो नि! त्यति मात्रै होइन यो ५ बर्षमा जिल्ला कार्यसमितिमा रहँदा मलगायत हामी कोही पनि कुनै पक्ष भएनौ। केवल कांग्रेस भयौं। र, चुनावताका कोही कसैसँग नजिक हुनसक्छ। तर, त्योे निर्वाचनसम्म मात्र हो। चुनाव सकिएपछि गुटको आधारमा पक्षधरता सकिनुपर्छ भन्नेमा म सधैं लडिरहेको छु।
गुट र समूह होइन कांग्रेस बनाउने अठोटसहित म कांग्रेस भएको हो। म सबैसँग मिल्न र मिलाएर जानसक्छु, आम कांग्रेसीले चाहेको पनि त यही हो। म सधैं व्यक्तिले होइन विचारले, नेताले होइन नीतिले कांग्रेसको रुपान्तरण सम्भव छ भन्दै आएको छु। आम मतदाताले अनुमोदन गरेको र अनुमोदन गर्ने समूह नै मेरो समूह हो। म यो मान्यतासहितको कांग्रेस र त्यो काग्रेसको ईमान्दर सिपाही हुँ।
७) गुट उपगुटलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडी बढाउन तपाईको भूमीका कस्तो रहन्छ ?
म हिजोदेखि भन्दै आएको छु, पार्टीमा आन्तरिक निर्वाचन सकिएपछि हामी सबै एक ठाउँमा हुन्छौं। चुनावमा बन्ने समूहका आधारमा कसैमाथि काखा र पाखा हुनुहुँदैन। योग्यता, क्षमता एवं कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा अवसरको वितरण गर्ने कुरामा म सधै दृढ छु। यही मान्यताले जिल्लामा रहेका सबै समूहलाई मिलाएर सबल र सदृढ कांग्रेस बनाउने म उपयुक्त पात्र हुँ भन्ने ठान्छु। यो कुरा मैले अवसर पाउँदा प्रमाणित गरेको छु। हाम्रो अगाडि रहेका तीनै तहका निर्वाचनमा मैले यो समन्वयकारी भूमिका र क्षमताको उपयोग गर्नसक्छु। हामी सबै मिलेर निर्वाचन जित्नु छ। एकताबद्ध, सुदृढ, सबल र गतिशील काग्रेस आजको आवश्यकता हो। नेता कार्यकर्ताले विश्वास गर्ने, आम जनताले भरोसा गर्ने पार्टी निर्माणमा सिंगो कैलाली काग्रेसलाई एक ठाउँमा उभ्याउने मेरो अभियान हुन्छ।
८) अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
लोकतान्त्रिक पार्टीको जीवनमा अधिवेशन नियमित प्रक्रिया हो। यो स्वस्थ प्रतिश्पर्धाबाट सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने अवसर हो। वी.पी कोइरालाले, अधिवेशन भनेको नेताहरुको मात्रै परीक्षा होइन हरेक कार्यकर्ताको विवेकको परीक्षा हो भनेझैं आन्तरिक प्रतिश्पर्धामा सबै प्रतिनिधिहरु सजग सचेत छन्। हामी सबैलाई नयाँ उत्साह र नयाँ ऊर्जासहितको काँग्रेस चाहिएको छ।रुपान्तरित काँग्रेस हामी सबैको चाहना हो। यही अभियानसहित म चुनावी प्रतिश्पर्धामा होमिदैछु। यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षासहित सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। मेरो पार्टीका आम मतदाता, प्रतिनिधिहरुको विश्वासलाई डग्मगाउन दिने छैन। मलाई मत दिएर आगामी कार्यकालभरी कुनै एकदिन पनि पछुताउने अवस्था आउन दिने छैन।
Next articleचिसो बढेसँगै छालामा सङ्क्रमणको खतरा